Maxaa Hortaagan In uu Qabsoomo kulanka golaha shacabka? -
HomeWararkaMaxaa Hortaagan In uu Qabsoomo kulanka golaha shacabka?
Maxaa Hortaagan In uu Qabsoomo kulanka golaha shacabka?
Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa Maanta taariikhduna ku beegan tahay 6/7/2019 waxaa lagu wadaa inay kulankoodii caadiga ahaa ku yeeshaan Xarunta Golaha Shacabka ee Magaalada Muqdisho iyadoo laga cabsi qabo in kulanka markale uu kooram la’aan u baaqdo.
Xildhibaano badan oo ka tirsan golaha shacabka ayaa ka maqan caasimada dalka iyadoo qaarkood ay safaro dibadda ah ku maqan yihiin halka kuwo kalana ay gobolada dalka ku sugan yihiin.
Kulamadda Xildhibaanadda ayaa baaqanayay maalmihii ugu dambeeyay, waxaana Gudoomiyaha Golaha Shacabka uu ku baaqay in xildhibaanada ay soo xaadiraan kulanka, islamarkaana Cidii maqnaata lala xisaabtami doono.
Ajendaha kulanka ayaa ah Akhrinta koowaad ee wax ka badalka sharciga shaqaalaha rayidka iyo warbixinta Baarlamaanka Jaamacadda Carabta.
Hase ahaatee waxaa muuqata in ay Xildhibaanada Baarlaamanka naqdeen kuwa ka shaqeeya danahooda Gaaarga ah balse aan u adeegin waxii loo doortay ee ahaa in uu dalka iyo dadka u adeegaan waana nasiib daro ku dhacday shacabka somaliyeed.
Waxaanaa ay aad ugu dhaliilayan arrinkaasi Madaxweynaha somaliya maxamed farmaajo iyo R/wasare kheyre ayagoo ku bixiya dhaqaalo fara badan in aysan soo xaadirin xildhibaanada baralamaanka somaliya ujeedkooduna waxa uu yahay in aan lala xisaabtamin oo ay iska sameeyaan waxa ay doonaan.